သက်ဝေ: January 2020
အိပ်မက်ဆိုတာ အလွမ်းတွေကနေ မြစ်ဖျားခံလာခဲ့တာပဲ။ အလွမ်းရဲ့ ထုထည်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိပ်သည်းထူထဲ လာတဲ့အခါ ပုံသဏ္ဍာန် တစ်ခုခုအဖြစ်နဲ့ ဖွဲ့တည်ပြီး စိတ်ထဲ၊ အတွေးထဲ၊ နှလုံးသားထဲကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် တိုးဝင် ရိုက်ခတ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သိစိတ်က ဖြစ်စေ၊ မသိစိတ်ကဖြစ်စေ စွဲလမ်းတမ်းတရင်း အိပ်မက်တွေအဖြစ် မက်မြင်လာတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အိပ်မက်တွေထဲမှာမှ "ရန်ကုန်" လို့ အမည်ရတဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ အလွမ်းအိပ်မက်ရှည်တစ်ခုကို မေတ္တာပေါင်းကူးစာပေရဲ့ စိတ်ကူး အစီအစဉ်နဲ့ အက်ဆေးစာစုတွေအဖြစ် လှလှပပ ရေးသီဖွဲ့ရင်း ကျွန်မတို့ မက်မြင်ခွင့် ကြုံရပါတယ်။ "ရန်ကုန်အက်ဆေး" လို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ ဝါရင့် ကလောင်ရှင် ဆရာကြီး ဆရာမကြီးတွေ အပါအဝင် စာရေးသူ ငါးဆယ့်ကိုးယောက်က သူတို့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလတွေနဲ့ သူတို့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ အလိုက် ရန်ကုန်ကို အိပ်မက်တွေ အစီအရီ မက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ ရန်ကုန်ကို ဘယ်လို အိပ်မက်တွေ မက်ထားသလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ရန်ကုန်အိပ်မက်မှာ ဘာတွေပါဝင်သလဲဆိုတာကို အက်ဆေး တစ်ပုဒ်ချင်းစီတိုင်းမှာ ရသတစ်မျိုးစီနဲ့ တွေ့မြင် ခံစား ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အက်ဆေးတွေကို ရန်ကုန်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ချစ်ခင်ခဲ့ကြသူများ၊ ရန်ကုန်နဲ့ အလှမ်းဝေးလို့ ရန်ကုန်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် မရင်းနှီး မသိကျွမ်းခဲ့ကြသူ စိမ်းသက်ခဲ့ကြသူများ၊ ရန်ကုန်ကို ချစ်လျက်နဲ့ ဝေးခဲ့ကြရလို့ ရန်ကုန်ကို သတိတရ လွမ်းဆွတ်နေကြဆဲ ရန်ကုန်ချစ်သူများ အပါအဝင် ရန်ကုန်မှာနေရင်း ရန်ကုန်နဲ့ ဝေးနေသူများ၊ ရန်ကုန်ကို သိသော မသိသော၊ ချစ်သော မချစ်သော၊ ရန်ကုန်နဲ့ အနီး အဝေးမှ စာဖတ်သူများ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအပြင် ဟိုးတုန်းက ရန်ကုန်ကို မသိလိုက် မမီလိုက်သူများအတွက်လည်း ဒီရန်ကုန်အက်ဆေးတွေကို လှပတဲ့ အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်ရှည်တစ်ပုဒ်အဖြစ် ခံစား ဖတ်ရှုနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာချစ်သူ အားလုံးအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု တစုံတရာကို ဒီအက်ဆေးတွေက ယူဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရန်ကုန်အက်ဆေး စာအုပ်ထဲက ကျွန်မ ဖတ်မိသလောက် နှစ်သက်တဲ့ အက်ဆေးတစ်ချို့ကို စာမြည်းအဖြစ် မျှဝေခွင့်ပြုပါ။
ဘဝမှာ အတိတ်တွေများလာပြီး အနာဂတ်တွေ နည်းလာတဲ့ အရွယ်ရောက်တော့… လို့ အစချီထားတဲ့ စာကြောင်းလေးက ကျွန်မကို အရင်ဆုံး ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ရှင်သန်နေထိုင်ရင်း အတိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်း များလာပြီး အနာဂတ်တွေ နည်းလာနေပြီ ဆိုတာ စာရေးသူနဲ့အတူ သတိထားမိသွားတယ်။ သီချင်းအသစ်တွေ နားထောင်ပေမယ့်လည်း နှုတ်ဖျားက တီးတိုးဆိုညည်းမိရင် သီချင်းအဟောင်းတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတတ်သလို ရန်ကုန်ရဲ့ ပုံရိပ်သစ်ကို မစိမ်းပေမယ့် ပုံရိပ်ဟောင်းမှာ တဝဲလည်လည်ဖြစ်ရ၊ ရန်ကုန်ရဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းကို လွမ်းတမ်းတရတဲ့ အကြောင်း စီကာရီကာ ဖွဲ့သီထားတာကို ဒီအက်ဆေးလေးမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူက သူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြင်ကွင်းတွေ၊ လှည်းတန်းဈေး၊ ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေး၊ ရွှေတိဂုံဘုရား၊ တော်လှန်ရေးပန်းခြံ၊ ကန်တော်ကြီး စတဲ့ အထင်ကရ နေရာတွေ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ တော်လှန်ရေးနေ့၊ အာဇာနည်နေ့ စတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော် နေ့တွေ၊ နောက်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရာသီအလိုက် ပွဲတော်တွေထဲက ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ အစရှိတာတွေကို သတိရချင် လွမ်းဆွတ်ချင်စရာဖြစ်အောင် မျက်စိထဲ မြင်ယောင်လာနိုင်အောင် အသေးစိတ် ခြယ်မှုန်း ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
အဆုံးသတ်မှာတော့… တစ်စုံတစ်ခုဟာ အစကတည်းက မရှိခဲ့ရင် တမ်းတစရာ မရှိဘူး။ ရှိပြီးမှ မရှိတော့တဲ့အခါ အမှတ်တရ အလွမ်းဆိုတာ ဖြစ်လာတော့တယ် လို့ ရေးထားတာလေးကလည်း ရန်ကုန်လွမ်းချင်းလေးကို ပိုပြီး ပီပြင်လာစေပါတယ်။ မမေသီတာဝင်းကို Facebook ပေါ်မှာ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ သူ့ကဗျာလေးတွေကနေတဆင့် ကျွန်မ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်၊ တိုတိုရှင်းရှင်း၊ ကျစ်လစ်တဲ့ရေးဟန်နဲ့ ချစ်စရာ ကဗျာလေးတွေကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိတာကြောင့် ရန်ကုန်အက်ဆေး စာအုပ်ရရချင်း အရင်ဆုံး ရှာဖတ်ဖြစ်တဲ့ အက်ဆေးပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်နေချိန်မှာရော ဖတ်ပြီးသွားချိန်မှာပါ တကယ်လွမ်းရလို့ စာရေးသူကို ကျေးဇူးတင်မိစေတဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပါ။
*၁၉၈၀ ရန်ကုန် (Kyaw Lion)*
ဒုတိယတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ကျွန်မ ဖတ်ဖြစ်တာက "၁၉၈၀ ရန်ကုန်" လို့ အမည်ရတဲ့ အက်ဆေးပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ အက်ဆေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်က ကျွန်မကို စတင် ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များဆီက ရန်ကုန်ဟာ ကျွန်မအတွက် အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပြီး ကျွန်မနဲ့ လက်ပွန်းတတီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ စာရေးသူ Kyaw Lion ရဲ့ လက်ရာ အက်ဆေးက အနည်းငယ် ရိုးရှင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ၁၉၈၀ နှစ်များဆီက ရန်ကုန်ရဲ့ အထင်ကရ ပုံရိပ်တွေကိုတော့ ပီပီပြင်ပြင် ထင်ဟပ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ကြေးအိုးတစ်ပွဲ လေးကျပ်ခွဲ - ၃၅လမ်း၊ ၃၆လမ်း နဲ့ ရွှေတောင်တန်း
လက်ဘက်ရည် တစ်ခွက် တစ်ကျပ်
ဘားလမ်း မုတ်ဆိတ်၊ ရွှေလမင်း၊ ဒဂုံ နဲ့ လက်ရွေးစင်၊ ရေကျော်က မောင်အေး စမူဆာ
မုန့်ဟင်းခါးအကြော်နဲ့ တစ်ကျပ်ခွဲ - တင်တင်အေး နဲ့ မြောင်းမြဒေါ်ချို ၊
လွစ္စလမ်း ရွှေလှေကား၊ ရှားမီး၊ ရသာ နဲ့ ပြည်သူ့မုန့်တိုက်
အအေးဆို ဖူဂျီ နဲ့ကိုတင်အုန်း - စတော်ဘယ်ရီလက်ဖျော် - လေးကျပ်
သူ့သမီးအငယ် ငမ်းတာ - ဖရီး Free ***
သူ့သမီးအငယ် ငမ်းတာ - ဖရီး Free ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မ အသံထွက် ရယ်မောမိပါတယ်၊ ကြံကြံဖန်ဖန်…။
ယင်းမာက အခွေဝယ် Hitachi - တစ်ဆယ်ကျပ်
တေးသံသွင်းဆိုင်တွေက တက္ကသိုလ်၊ သမ္မတ၊ စိုးစံ၊ ရွက်ဝါ၊ စင်ကာပူ၊ အာရုဏ်ဦး၊ တေးပုလဲ
သီချင်းစာအုပ် - ငါးမူး တဲ့။
ကြည့်ပါဦး… ၁၉၈၀ ရန်ကုန်ရဲ့ တကယ့် ပုံရပ်စစ်တွေ။ ကျွန်မတို့ အတူတူဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့ နေ့ရက်တွေ အချိန်ကာလတွေ၊ ခေတ်တွေ စနစ်တွေ။ ဒါတွေကြောင့်မို့ ဒီအက်ဆေးကို ကျွန်မ ငြိတွယ်မိပြန်တယ်။ ပြီးတော့ စာရေးသူက သူ့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လည်း ရေးပေးထားသေးတယ်…
ဖုန်းနံပါတ်က ၅ လုံး - ၅၂၅၀၇ (ကျနော်တို့နံပါတ်)၊ ဖုန်းတစ်ခါဆက် တစ်ကျပ် တဲ့။ မှတ်ရလွယ်တဲ့ ဂဏန်း ငါးလုံးနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေ။ ကျွန်မ ပိုက်ဆံတစ်ကျပ် ကိုင်ပြီး အဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ဘဝတွေဟာ ပြည့်စုံကြွယ်ဝလှတယ် မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ တကယ်ပဲ ပြန်လည် တမ်းတလွမ်းမောချင်စရာပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ စာရေးသူဟာ သူ့ရဲ့ အက်ဆေးကို ပျော်ခဲ့ရတဲ့အပျော် - တစ်သက်တာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင် (Priceless…!!!!) လို့ ရေးပြီး အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ သူက အဲဒီလို အဆုံးသတ်လိုက်ပေမယ့် စာဖတ်သူတွေရဲ့ အတွေးတွေကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဆုံးသတ်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။၊ ၁၉၈၀ နှစ်များဆီက ရန်ကုန်ရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို တကောက်ကောက် လိုက်ပါစီးမျောနေမိဦးမှာ သေချာပါတယ်။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသား လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရန်ကုန်အိပ်မက်နဲ့ ရင်ဖွင့်ညည်းတွားသံတွေ ရောယှက် ဝေစည်နေတဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေရဲ့ ဂိတ်ဆုံးတွေဟာ အမြဲတမ်း ရန်ကုန် ဖြစ်နေတတ်တယ်၊ ရန်ကုန်ဟာ မျှော်လင့်ခြင်းလား လို့ သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာခဲ့ခြင်းဟာ အနာဂတ်တစ်ချို့ကို မေးမြန်းချင်လို့၊ ဘဝဆိုတာကို ပြန်လည်သင်ယူဖို့ လို့ တွေးထားတယ် တဲ့။ ဒီအက်ဆေးလေးကို အမှတ်မထင် ဖတ်လိုက်မိရာကနေ ကျွန်မစိတ်ထဲကို စစဆုံးဆုံး ဝင်ရောက်ငြိတွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိပ်မက်တွေကို ပွေ့ပိုက်လို့ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ရန်ကုန်ဟာ ဘယ်လို ကြိုဆိုသလဲ၊ သူ့ဘဝနဲ့ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ရန်ကုန်က ဘယ်လို ဖန်တီးလိုက်သလဲ၊ ရန်ကုန်မှာ သူ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာ ဘာတွေလဲ၊ ရန်ကုန်ကနေ သူ ရသွားတာ ဘာတွေလဲ... အက်ဆေးထဲက ဇာတ်ကောင်နေရာမှာ အတူတူ ဝင်ရောက်ခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
နာမည်ကျော်လှတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကို တက်ချင်ခဲ့သူ၊ ဆရာမင်းလူရဲ့ စာထဲက ဇာတ်ကောင်တွေလို လှုပ်ရှားချင်ခဲ့သူ၊ ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာထဲကလို ကျောင်းနံရံမှာ ဒေါင်းအလံ စိုက်ချင်ခဲ့သူ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိပ်မက်တွေဟာ ရန်ကုန်ကို စရောက်တဲ့နေ့မှာတင် မှိန်ဖျော့နေခဲ့ပြီ တဲ့။ တစ်ချို့နေ့တွေမှာ ဘုရားကို စိတ်လိုလက်ရ ရှိခိုးရင်း၊ မှိုတက်နေတဲ့ လူနေမှု အသိုင်းအဝိုင်းလေးထဲမှာ ကျောတစ်ချစာ နေရာငယ်လေး တစ်ခုအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်း၊ မိုးခါးရေ ဆိုတာကို ခေတ်နဲ့ တစ်ပြိုက်နက် သောက်ချရင်း၊ အမှန်တရားနဲ့ အသိတရားတွေကို မသိကျိုးကျွန်ပြုရင်း၊ ငွေကြေးနဲ့ ဘဝကို ရောဂါဖြစ်တဲ့အထိ လဲလှယ်ရင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာ မောဟိုက်နွမ်းလျလာခဲ့ပုံတွေ၊ ရန်ကုန်ဟာ အင်ဂျင်တစ်လုံးပဲ… သူ ဆက်လက် လည်ပတ်လို့ရအောင် ဘဝများစွာဆီက စွမ်းအင်တွေကို စုတ်ယူနေတယ် လို့ နာနာကျင်ကျင် ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
စာရေးသူဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ဘဝကို အထပ်ခိုးလေးထဲမှာ ခေါက်သိမ်း၊ တရားဓမ္မကို စာအုပ်ထဲ ခေါက်သိမ်း၊ ဘဝကို ဆေးစာရွက်ထဲမှာ ခေါက်သိမ်း၊ နာကျင်မှုတွေ နာရီတွေ သံယောဇဉ်တွေ မေတ္တာတွေနဲ့ ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်တွေ အားလုံးကို သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာတကျ ခေါက်သိမ်းအပြီးမှာ သူ့ရဲ့ အက်ဆေးကို…
“အင်ဂျင်တစ်လုံး ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဟာ ရန်ကုန်ကြောင့် အသက်ရှင်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆေးစာရွက်ကလေးတောင် နွမ်းသွားပြီ။” လို့ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မပြောပြချင်တော့ပါ။ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ကြည့်ပါ။ ခံစားကြည့်ပါ။ ဒါတွေဟာ ရန်ကုန်မှာ တကယ်ပဲ ရှိနေတဲ့၊ တကယ်ပဲ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဘဝအစစ်တွေလို့ ကျွန်မလိုပဲ လက်ခံနိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်နေပါ့မယ်။
*၃၃ လမ်းကျဉ်းလေး (ခင်လွန်း)*
ကျွန်မငယ်ငယ်က စာစောင်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ကြားဖူးခဲ့သော်လည်း အပြင်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မရင်းနှီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ "လေထန်ကုန်း" ဆိုတဲ့ နေရာလေးအကြောင်းကို ဒီ အက်ဆေးလေးက တစ်ဆင့် ပြန်လည်ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူ ခင်လွန်းက လေထန်ကုန်းကို အခုလို ပုံဖေါ် ရေးဖွဲ့ပါတယ်။
"မြစ်များ ချောင်းများသည် ခရီးမိုင်ပေါင်းများစွာကို မောကြီး ပန်းကြီး ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြရင်း ပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်ပေါင်းစည်းလာကြသည့်ပမာ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ စာသမား ကဗျာသမား ပန်းချီဆရာ ဂီတ တပ်မက်သူ... စသည် စသည်တို့သည် လေထန်ကုန်းသို့ တသွင်သွင် စီးဝင်လာတတ်သည်မှာ အမျှင်ပြတ်သည် မရှိ..." တဲ့။ ဒီလိုလေး ဖတ်လိုက်ရ ကြားလိုက်ရတာနဲ့ကို ဒီအက်ဆေးက ဒီနေရာလေးက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပြီ။
လေထန်ကုန်းကို ရောက်လာကြတဲ့ အနုပညာသည်တွေရဲ့ စကားဝိုင်းတွေကို အသေးစိတ် ရေးဖွဲ့ထားပုံဟာ ကိုယ်ပါ အဲဒီ ဆရာ ဆရာမတွေ အနားကို ရောက်သွားသလို ခံစားရစေပါတယ်။ လေထန်ကုန်းရဲ့ ရင်ခုန်သံ၊ လေထန်ကုန်းရဲ့ နမိတ်ပုံ၊ လေထန်ကုန်းရဲ့ သင်္ကေတ၊ လေထန်ကုန်းရဲ့ ခေတ်ပြိုင် ခံစားစီးဆင်းမှု… ဒီနေရာလေးမှာ သူရဲကောင်းတွေ မျက်ရည်ကျခဲ့ရ၊ ဒီနေရာလေးမှာပဲ သူရဲကောင်းတွေ အော်ဟစ်ရယ်မောခဲ့ရ။ ဒီနေရာလေးမှာ ပင်လယ်လို ပေါင်းစည်းးပြီး ပင်မသွေးကြောတွေလို ခက်ဖြာပျံနှံ့ သွားကြ။ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ငွေကြေး ဥစ္စာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုမေ့၊ အိမ်မေ့ ယာမေ့ ဇနီးမယား သမီးသားတို့ကိုပါ မေ့နေစေတဲ့အထိ လေထန်ကုန်းမှာ သူတို့တတွေ လှပစွာ ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ် တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့အနုပညာတွေနဲ့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ထွန်းညှိခဲ့ကြ၊ လောကကို ထွန်းညှိခဲ့ကြတဲ့ နေရာလေး။ ၃၃ လမ်းထိပ်က ရေတမာပင်ရိပ်လေး၊ လေထန်ကုန်း လို့ ဖွဲ့သီပါတယ်။
ကဗျာဆရာ အောင်ဝေးက အစ မောင်ချောနွယ် ဆရာအောင်ချိမ့်၊ ပန်းချီမုတ်သုန် အလယ်၊ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ မြသန်းတင့် တို့ အဆုံး အနုပညာသမားတွေ အားလုံးရဲ့လေထန်ကုန်း။ ညနေ ညနေတွေဆိုရင် အားလုံး ရီဝေဝေ။ ညနေခင်း ရင့်အိုလာပြီ ဆိုရင်တော့ အသွင်တူ ငှက်တွေ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းကြသလို အလျှိုလျှို ထွက်သွားကြ… လို့ ရေးဖွဲ့ထားပုံဟာလည်း လေထန်ကုန်းရဲ့ ညနေ အိမ်ပြန်ချိန် မြင်ကွင်းကို အသက်ဝင် ထင်ရှား မြင်သာလှပါတယ်။ ညနေ ညနေတွေဆိုရင် အားလုံး ရီဝေ ရီဝေ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ကာလများ လူပုဂ္ဂိုလ်များ ခေတ်များ ရွေ့လျား… အဲဒီနေရာလေးက အတိတ်မှာ မှုန်ရီလို့ကျန်နေခဲ့။ လွမ်းဖွယ်အတိတ်၊ ချစ်သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ….
“ကြယ်တွေ ကြွေသွားကြတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အလင်းရောင်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျန်ရစ်ခဲ့စမြဲပဲလေ” ဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်လေးမှာ စာရေးသူနဲ့ အတူ ကျွန်မ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ နေရာလေးကို ပုံဖေါ်မြင်ယောင်ကြည့်ရင်း လိုက်ပါ လွမ်းမောရပါတယ်။
မောင်ရစ်ရဲ့ ရန်ကုန်ကို ဗဟိုပြု၍ စဉ်းစားနေထိုင်ခဲ့ခြင်းများ
ဘလက်ချောရဲ့ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်အောင်နေ
လွင်မောင်မောင်ရဲ့ တစ်ယောက်ယောက်တော့ မှတ်မိလိမ့်မယ် အက်ဆေးတွေ အပါအဝင်
ဆရာ နိုင်ဝင်းသီရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း၏အခြားတစ်ဖက်မှာ
ဆရာမကြီး ဝင်ဒီလောရုံရဲ့ မှော်ရုံတော… အစရှိတဲ့ အက်ဆေးတွေဟာလည်း စာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲငြိထင်ကျန်စေမယ့် အက်ဆေးကောင်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာဖုံးပန်းချီကို ဆရာ ထွန်းဝေမြင့်က ရေးဆွဲပေးထားပြီး မြင်တွေ့နေကျ ရန်ကုန်မြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ မတူ၊ ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ ရန်ကုန်ကို သူ့ရဲ့ စုတ်ချက် အထူအပါးအောက်မှာ ရှုမြင်ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် အတွင်းထဲမှာလည်း အတိတ်ထဲက ရန်ကုန်ကို လွမ်းမောသွားစေမယ့် ရှားပါးဓါတ်ပုံများကို မြင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ်တန်ဖိုး ၆၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ သြဂုတ်လမှာ ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ အက်ဆေး စာအုပ်သစ် တစ်အုပ်ပါ။
အိပ်မက်တစ်ခုဟာ ကိုယ်တကယ် မက်မြင်ဖူးမှသာ ကောင်း မကောင်း၊ လှ မလှ သိနိုင်မယ် လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အခု ရန်ကုန်အိပ်မက်တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မက်ကြည့်ကြစေချင်တယ်။ ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက ရန်ကုန်နဲ့ ကျွန်မတို့တတွေ မက်ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်… ဘယ်နေရာမှာ ထပ်တူကျသလဲ… ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေ ကွာခြားသလဲ ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားပြီလဲ… အစရှိသဖြင့် အေးအေးဆေးဆေး အတွေးနယ်ချဲ့ကြည့်ရအောင်ပါ။
- ရန်ကုန်အက်ဆေး စာအုပ်အတွက် ရေးဖြစ်တဲ့ စာအုပ်အညွှန်းပါ။ မိုးမခ online မှာ ဖတ်လို့ရသလို မိုးမခ မီဒီယာ ရဲ့ Facebook Page မှာလည်း ဖတ်လို့ရပါတယ်။
ချစ်သော မိုနေးရဲ့ ပန်းချီကားတွေ...
• မိုးကောင်းကင်ကို ဖွင့်ခဲ့သူ •
တော်ရုံ နှလုံးသားမျိုး၊ တော်ရုံ စိတ်ဓါတ် ကြံ့ခိုင်မှုမျိုးနဲ့ ဖန်တီးရေးသားဖို့ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ကျွန်မလက်ထဲမှာ ရှိနေတာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဟိုတစ်ရက်က စာရေးသူက သူရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးကို ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ ရှိရင် PDF နဲ့ ပို့ပေးမယ် Email address တွေ ရေးပေးခဲ့ပါလို့ Facebook မှာ စတေးတပ်စ် တင်တာ တွေ့လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။ သူပြောတာ နောက်ထပ် စာအုပ်အသစ် တစ်အုပ်များလား ဆိုပြီး အဲဒီစတေးတပ်စ်အောက်မှာ ကျွန်မ email လိပ်စာလေး ချရေးခဲ့ပါတယ်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စာအုပ် PDF File နဲ့အတူ သူ့ဆီက email ပြန်ဝင်လာတယ်။ ရရချင်း ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်မမှာ ရှိနေခဲ့ပြီးသား စာအုပ်ပဲ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ စာစုလေးကို အစအဆုံး တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်မမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ကို ပြန်ရှာခဲ့ပါတယ်။ ရိုးသားရှင်းလင်းတဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ စာအုပ်ပါးလေးဟာ ကျွန်မရဲ့ စာအုပ်စင်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူ ဒေဝဟာ သူ့ကိုယ်သူ "ကျွန်တော့်နာမည် ဒေဝ ပါ" လို့ ရိုးရိုးပဲ မိတ်ဖွဲ့ရင်း သူ့ရဲ့ စာစုကို အစပြုလိုက်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိုးကောင်းကင်ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ ဟီးရိုးဆိုရင် စာရေးသူ ဒေဝရဲ့ မိုးကောင်းကင်ဟာ "စိုးလွင်လွင်" လို့ ကျွန်မတို့ သိခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီ ဟီးရိုးတစ်ယောက်အကြောင်း (သို့) ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်အကြောင်းကို အမှတ်တရ သတိတရ ရေးထားတဲ့စာမို့ စာရေးသူရဲ့ နှလုံးသား အခင်းအကျင်းကို ကြည်လင် ပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ငယ်ဘဝလေးထဲမှာ သူချစ်တဲ့ အဖေ၊ သူ့ရဲ့ မိုးကောင်းကင်နဲ့ ပတ်သက်လို့... အဖေ အငှားကား မောင်းလို့ အဆင်ပြေတဲ့ ညဖက်တွေမှာ ပြန်လာရင် ခေါက်ဆွဲကြော်ဝယ်လာတတ်တာက အစ၊ ၁၉၈၅/၈၆ မှာ ချစ်လူမိုက် အခွေထွက်တာ၊ ညီမလေး ရွှေအိမ်စည်ကို မွေးတဲ့ အချိန်မှာ ချစ်လူမိုက် အခွေပေါက်ပြီး အောင်မြင်လာတာ၊ သူတို့ရဲ့ ရန်ကင်းအိမ်လေး လျှာထိုးကြမ်းခင်းတာ၊ အဖေရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေ လူကြိုက်များပြီး ရောင်းရလာတာ... စတဲ့ အမှတ်ရစရာလေးတွေ ဖတ်ရတယ်။ ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်… အဲဒီအချိန်က ကျွန်မတို့ သိခဲ့တဲ့၊ ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်… "ဆံပင်တွေကို လေနဲ့ မှုတ်မယ် ချစ်လို့… ချစ်လို့..." ဆိုတာ စိုးလွင်လွင်ရဲ့ လက်ရာတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။
သူ့စာထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ရင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကတော့ အသိတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အဆိုတော်အသစ်ရဲ့ အခွေတစ်ခွေ မူပိုင်ဝယ်မလားလို့ လာမေးတာ၊ အမေက ဝယ်လိုက်ပါလား ဆိုတာကို အဖေက "ငါက အနုပညာသမား စီးပွားရေး မလုပ်နိုင်ဘူး... အဲဒီအခွေကို ဝယ်လိုက်ရင် အဆိုတော်ကို ခေါင်းပုံဖြတ်သလို ဖြစ်သွားမယ်၊ အနုပညာသမားအချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့အလုပ်ကို တသက်လုံး မလုပ်ဘူး" လို့ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ တကယ့် အနုပညာသမား စစ်စစ်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အထင်အရှား မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အခွေကတော့ "နာရီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များ" ဖြစ်ပြီး အဆိုတော်ကတော့ အားလုံးသိတဲ့ "ထူးအိမ်သင်" ပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ အဖေသွားရာ တကောက်ကောက်လိုက်ရင်း စိုးလွင်လွင်ရဲ့ လက်တွဲဖေါ် တေးရေးဆရာတွေ ဖြစ်လာမယ့် ညီညီသွင်၊ ညီညီစံတို့နဲ့ ရန်ကင်း ၁၂ လုံးတန်းထိပ်က စုရပ်လေးမှာ တွေ့ဆုံဖြစ်ကြတာ၊ သူရဲကောင်း တို့ရဲ့ နှလုံးသား တေးစု ထွက်လာတာ၊ ခေတ်ကာလ မတည်မငြိမ် အနေအထားထဲမှာ သီချင်းကောင်းလေးတွေ ပါရဲ့သားနဲ့ အခွေက ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့တာ၊ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့အိမ်ကို အောင်ရင် ထူးအိမ်သင်တို့ ရောက်လာတတ်တာ၊ ညီညီသွင်ရဲ့ "မင်းမရှိရင် အသက်မရှင်ချင်ဘူး အချစ်ရယ် မနေ့က ငါသေဆုံးသွားခဲ့…" ဆိုတဲ့ စာသား အဆန်းလေးကို ကြားကြားချင်း နှစ်သက် သွားရတာ… စတဲ့ အကြောင်းတွေ အပြင် သူတို့ရဲ့ မိသားစု အခြေအနေလေးတွေကိုပါ စီစီရီရီ ရေးပြထားတာမို့ စာရေးသူဟာ ငယ်ပေမယ့် အတော်မှတ်မိတဲ့သူပဲ လို့ ကောက်ချက်ချရပါတယ်။
ကစားစရာတွေဆို ဘယ်လောက်ဈေးကြီးကြီး ဝယ်ပေးတတ်တဲ့ အဖေတစ်ယောက်အကြောင်း ကို ပြန်ပြောပြတဲ့အခါ သားကို လက်ဆွဲလို့ ပန်းဆိုးတန်းနားက စတိုးဆိုင်မှာ ကစားစရာ ဝယ်နေတဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်ကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်လာစေပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဝါးဝါးလေးမှာတောင် သားအတွက် ကစားစရာ ဆင်ပေးနေတဲ့ စိုးလွင်လွင်ရဲ့ အပြုံးကို တိတိပပ ပုံဖေါ်လို့ရခဲ့ပါတယ်။ သမီးငယ် ရွှေအိမ်စည်လေးကတော့ အရုပ်အကြီးကြီး တစ်ခုကို ပွေ့ပိုက်ရင်း ပြုံးပျော်လို့။
အဖေက သားကို သွားလေရာ ခေါ်သွားတတ်တယ်၊ သီချင်းသွင်းတဲ့ စတူဒီယိုတွေ၊ စတိတ်ရှိုးတွေ ခေါ်သွားဖို့ လိုတယ်ဆို ကျောင်းဖျက်ပြီး ခေါ်သွားတတ်တယ် တဲ့။ အဲဒီနောက် ရသမျှ ပိုက်ဆံတွေကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တစ်လုံးထဲ ထည့်ထားပြီး သားအဖ သုံးယောက် အတူတူနေခဲ့ကြတဲ့ ပျော်စရာ နေ့စွဲတွေ အကြောင်း၊ အင်းလျားလိတ်မှာ သွားစားကြတဲ့ နေ့စွဲတွေ ရှိသလို စားစရာမရှိတဲ့ နေ့တွေနဲ့ အိမ်နားက ထမင်းဆိုင်မှာ အကြွေးစားရတဲ့နေ့တွေ ရှိခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် သားအဖ သုံးယောက် အဲဒီလိုနေခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး တဲ့။ စာရေးသူနဲ့ ထပ်တူ ခံစားရတဲ့ စာမျက်နှာတွေပါ။ ပြန်လည်ရှာဖွေလို့ မရ၊ ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့ မရနိုင်တော့တဲ့ အချိန်တွေ…
"မိုးရေစက်တွေလိုပဲ လေထဲ မျောလွင့်ပါ… ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှား…" ဆိုတဲ့ မာနမျက်နှာ သီချင်းကို ရေးတုန်းက အပြင်မှာ မိုးဖွဲလေးတွေ ကျနေခဲ့တာ၊ အဲဒီသီချင်းကို တီးကြ ဆိုကြ အသံသွင်းကြချိန်က စောဘွဲ့မှူးနဲ့ ချစ်စမ်းမောင် ပါဝင်ခဲ့တာ။ မာနမျက်နှာ အခွေ အောင်မြင်တဲ့ အချိန်မှာ စာရေးသူ မောင်ဒေဝ လေးတန်း ပထမအစမ်း စာမေးပွဲ ကျပါတယ် ခင်ဗျာ... ဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့ ကျွန်မ ရယ်မိတယ်။ လေးတန်းကလေးရဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေထဲ သယ်ပိုးထားရတဲ့ စာမျက်နှာတွေ များလှချည့်လို့လည်း တွေးမိပြန်ပါတယ်။
သူ့အဖေ ရေးခဲ့တဲ့ တချို့သီချင်းတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုလည်း သူ့စာထဲမှာ ဖတ်ရတယ်။ ဘယ်တော့မှ မေ့မရတဲ့ ငယ်ချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိမယ် မဟုတ်လား… ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ "ငယ်သူမို့" ၊ ဘဝရေး မပြေလည်တဲ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ ရင်မဆိုင်ရဲခဲ့တဲ့ ဝေဒနာကို ဖေါ်ညွှန်းတဲ့ "ရင်ဆိုင်စရာ စွမ်းအား မရှိတော့လို့ပါ" ၊ သူ့ကို သိပ်ချစ်ပြီး သူကလည်း သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်ဇနီးအတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ "မှန်တာပြောရင် သစ္စာ…" စတဲ့ သီချင်းတွေ အကြောင်း ဖတ်ရတော့ စာဖတ်ရင်း စာရေးနေရင်းမှာ တစ်ချို့သီချင်းတွေကို သတိတရ နားထောင်ရပြန်ပါတယ်။
လွမ်းဆွေးရတဲ့ နေ့တချို့မှာ ဖြေစရာ ရှာကြည့်ရင်း
ဒီသီချင်းဟာ မင်းအတွက် ဖြစ်လာတယ်...
သောက တချို့တဝက်ကို ဖြေဖျောက်ပေးစွမ်းရှိလို့လည်း
ဒီသီချင်းအတွက် မင်းကို ကျေးဇူးပဲ... ...
မခွဲဘူးအချစ်ရေ… မခွဲဘူး အသက်ရေ…
အဆင်ပြေကြဆုံး တို့နှစ်ယောက် ချစ်ကမ္ဘာမှာ…
ပိုးချည်မျှင် လွန်းရက်ကန်းတင် အကွက်လှလှလိမ်းခြယ်
အဲဒီနောက် ခိုင်ထူးနဲ့ နှစ်ယောက်တွဲအခွေ "ထားရစ်ခက် နေခဲ့တော့မယ် " အတွက် သီချင်းတွေ သွင်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတယ်။ တစ်ည စတူဒီယိုတစ်ခုကနေ သီချင်းသွင်းပြီး အပြန် ကားမောင်းလာရင်း အင်းလျားရောက်တော့ ဆီကုန်သွားတာနဲ့ ကားကို ရပ်ထားခဲ့ပြီး အိမ်ပြန် အိပ်နေတဲ့ အကြောင်း ဖတ်ရတော့ အင်း… လုပ်တော့မယ် လို့ တွေးရင်း ပြုံးမိတယ်။ တကယ်ကို ရိုးရိုးသားသား စိတ်ရှင်းရှင်း လူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ဒီလိုပဲ တွေး၊ ဒီလိုပဲ ပြုမူလိမ့်မယ်ဆိုတာ နည်းနည်းမှ ယုံမှားသံသယ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆီကုန်တယ် မောင်းမရတော့လို့ ထားခဲ့တယ်ပေါ့။ ခေတ်ကာလကလည်း ကောင်းတော့ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ ကားကို အလုံးအထည်မပျက် ဒီတိုင်း ပြန်တွေ့ရတယ် တဲ့။
၁၉၉၀ မှာ မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း… ထွက်တယ်။ မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း က ကိုင်ဇာရေးပြီး စိုးလွင်လွင် ဆို၊ အင်မတန် နာမည်ကျော် သွားခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မတို့ ကျောင်းတွေပိတ်ပြီး နားနေရတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ သီချင်းတွေ အများကြီး နားထောင်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ပါ။ အဲဒီအခွေထဲက သီချင်းတွေ အကုန်လုံးကို စွဲလမ်း နှစ်သက်ခဲ့တာ မှတ်မိနေပါတယ်။ မျက်လုံးရိုင်း၊ ရက်စက်တယ်၊ ဝေးဝေးမသွားပါနဲ့၊ ခရေ… သီချင်းကောင်းလေးတွေ အများကြီးပါတဲ့ အခွေလေးပါ။ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကတော့ အလွမ်းရင့် လွမ်းမပြယ်…။
အနေအထိုင်တွေ တစ်မျိုးပြောင်းလို့ ရင်မှာ နာကျင်တယ်…
စေတနာတွေ လမ်းခင်းလည်း လှမ်းလျှောက်မလာခဲ့
ဝမ်းနည်းတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်မယ်…
စာရေးသူဟာ သူ့ရဲ့ မိုးကောင်းကင်အကြောင်းကို ပုံဖေါ်ရာမှာ ဆံပင်ညှပ်ရင် အင်းလျားလိတ်မှာ ညှပ်တာက အစ သောက်ရေဆို Evian မှ သောက်တာ၊ ဂျင်းဂျာကင်ကို မချွတ်တမ်းဝတ်တတ်တာ ဆိုတာမျိုးအထိ အသေးစိတ်ပါတယ်။ မွေးကျေးဇူး ကျွေးကျေးဇူးတွေတွေထက် ပိုတဲ့ အဖေတစ်ယောက်လို့လည်း အရိုးရှင်းဆုံး ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အမှတ်အသားတွေ။
နောက်တော့ ၁၉၉၃ မှာ ကာရန်သစ် အခွေထွက်လာ၊ ရှိုးတွေအများကြီး ဆိုရ၊ မိသားစုရေးရာတွေ အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့ရ၊ အဖေနဲ့ တကွဲတပြား နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေအကြောင်း၊ အမေနဲ့ နေတဲ့အချိန်မှာ အဖေလာခေါ်တဲ့အခါ သားအဖတတွေ လျှောက်လည်ကြ မုန့်တွေဝယ်စားကြ ပျော်ရွှင်ကြရတဲ့ အကြောင်း၊ သားအဖနှစ်ယောက် အပြင်သွားရင်း ကားတိုက်မိမလိုဖြစ်တော့ အဖေက သူ့ကို တွန်းထုတ်လိုက်တာ၊ အဖေကိုယ်တိုင်ကတော့ ကားရှေ့မှာ ပွန်းပဲ့ ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ လဲကျနေခဲ့တာ တဲ့။ ကံကောင်းလို့…။ အဲဒါတွေအပြင် ဘယ်နေရာသွားသွား ဘာကိစ္စလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုတော် စိုးလွင်လွင်ရဲ့သား လား ဆိုပြီး ကူညီတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုလည်း မမေ့မလျော့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
စာရေးသူက "ကျွန်တော့အဖေဟာ ဘဝမှာ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ပီသစွာ နေထိုင်သွားခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အနုပညာ မာန်မာနလည်း အလွန်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိ မခံပါဘူး။ သိတဲ့သူတွေလည်း သိပြီးသားမို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ သူဟာ တကယ်ပဲ သူ့အတွက်ရော ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါ မိုးကောင်းကင်ကို ဖွင့်ပေးသွားခဲ့တယ်” လို့ ပြောရင်း သူ့ရဲ့ စာကို အဆုံးသတ်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်တဲ့ အချိန်မှာ သူရေးခဲ့တဲ့ မူပိုင်သံစဉ်နဲ့ ကော်ပီသီချင်း အပုဒ် လေးရာ ကျော် ချန်ခဲ့သူ၊ ကော်ပီကတော့ ရေးခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ ရေးခဲ့ဟန်တူပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်တော့ ကော်ပီ တစ်ခါမှ မဆိုခဲ့သူ၊ ဝတ္ထုတို ဝတ္ထုရှည် တွေနဲ့ ကဗျာတွေလည်း ရေးခဲ့သူ၊ အနုပညာသမား ပီသစွာ နေထိုင် ရှင်သန်ခဲ့သူ၊ သူ့အတွက်တော့ အဖေဟာ မိုးကောင်းကင်ကို အလှပဆုံး ဖွင့်ပေးခဲ့သူ… စိုးလွင်လွင်။
(၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉)
မှတ်ချက် - အဆိုတော် စိုးလွင်လွင်ရဲ့သား စာရေးသူ ဒေဝရဲ့ မိုးကောင်းကင်ကို ဖွင့်ပေးခဲ့သူ စာအုပ်ကို သူ့ရဲ့ အားပေး တိုက်တွန်းမှုနဲ့ ပြန်လည်ခံစား ရေးသားပါတယ်။ ဒီစာ စ ရေးနေပြီ ဆိုတော့ မောင်ဒေဝ က ပြောတယ်၊ နှလုံးသားနဲ့ ရေးပါ အမ တဲ့။ ကျွန်မ သူပြောတဲ့အတိုင်း နှလုံးသားနဲ့ ခံစား ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Posted by သက်ဝေ at 11:15 PM No comments: